» युवाहरुको ‘प्रहार’ गर्दै डा.बाबुराम भट्टराई भन्छन,-: “गणतन्त्रको भात पाक्न ढिलो भयो भनेर राजतन्त्रको गोबर नखाऊॅ!”ताली या गाली ? युवाहरुको ‘प्रहार’ गर्दै डा.बाबुराम भट्टराई भन्छन,-: “गणतन्त्रको भात पाक्न ढिलो भयो भनेर राजतन्त्रको गोबर नखाऊॅ!”ताली या गाली ? – हाम्रो खबर
युवाहरुको ‘प्रहार’ गर्दै डा.बाबुराम भट्टराई भन्छन,-: “गणतन्त्रको भात पाक्न ढिलो भयो भनेर राजतन्त्रको गोबर नखाऊॅ!”ताली या गाली ?
काठमाडौ,कार्तिक १३ । एकै ट्विटले नेपाली राजनीति नै तरंगित गराउन सक्ने पुर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आज आफ्नो आधिकारिक ट्वीटरमा एक ट्विट गर्दै युवाहरुलाइ अनौठो तरिकाले अनुरोध गरेका छन ।
पछिल्लो समय राजाबादीहरुको आन्दोलनमा आधिकांश युवाहरु सहभागी भइरहेको सन्दर्भमा उनले ट्विटरमा लेखेका छन। “युवासंग आग्रह-गणतन्त्रको भात पाक्न ढिलो भयो भनेर राजतन्त्रको गोबर नखाऊॅ!”
संबिधान निर्माण कै समय देखि आधा उपलब्धि प्राप्त भयो भन्दै आएका भट्टराईले अहिलेको आधा गिलास उपलब्धीलाई जोगाएर बाॅकीगिलास भरौं भन्दै रिसको झोकमा आधा भरिएको गिलास घोप्टाएर पूरै गिलास खाली नगर्न युवाहरुलाइ सचेत बनाएका छन ।
त्यसै गरिए उनले बर्तमान सत्तालाइ स्याल र राजतन्त्रलाई ब्वासोँसंग तुलना गर्दै अगाडिको स्यालसंग लड्दा पछाडि झ्यांगमा लुकेको ब्वाॅसो बिर्सन नहुने बताएका छन। स्याल र ब्वासो दुबैसॅग लडेर अघिजाने साहस गर्न उनको आग्रह छ।